Marka aad noqoto badbaado? - Marka aad hesho Ciise!
Waxaad heli Ciise Salaadda
Waxaan la badbaadiyey by wadaad dhalinyarada ee kaniisadda Ljungby Pentecostal ah iga caawiyay inay aqbalaan Ciise by helitaanka ii si toos ah Ciise afkayga ku baryayaaye qaylo ah.
salaadda noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in wax sidan oo kale:
John 1:12. Laakiin in alla intii isaga ka helay, wuxuu iyagii wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, iyaga magiciisa rumaystay on in.
Tani ma la fahmay karaan. Kuwa Ciise heshay noqday carruurta Ilaah. Sidaas: Waxay ku badbaadnay. Waxaa jira dad badan oo ku odhan Aayaadka Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan mowduucan, laakiin waxaan si dhab ah u baahan tahay wax ka badan. Aayaddani waxa ay u dhan ayaa sheegay in.
Laakiin waxa dhaca marka aad ku badbaado? Sidee waa calaamadii? Aayaddan ka dib markii John 1:12 wuxuu noo sheegayaa waxa ku saabsan:
John 1:13. Kuwa ku dhashay, aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis nin, laakiin waxay ka dhasheen Ilaah.
Fantastic! Marka aad hesho Ciise iyo noqdaan ilmo Ilaah ka dhashay Ilaah. Ilaah qudhiisaa muuqataa marka aad hesho Ciise. Waa in ka badan fantastik ah. Markii aad aqbasho Ciise, wuxuuna soo dhex geli doonaa ninka gudaha ah oo mar kale iyada nooc. Waa dhalashada ruuxa ah. Ciise wuxuu ka hadlayaa in mar kale ku dhashay isla Injiil Cutubka 3. Ka hor inta aan sii wado, waxaan si deg deg ah eegi doonaa aayadda a halkaas ka:
John 3: 7-dii Ha la yaabin haddaan idinku idhi, Waa inaad mar kale dhalataan.
Tani pånyttfödelses badan waxay dhacdaa marka aad hesho Ciise. Waa mid la dhashay Ilaah (sida John 1:13 wuxuu leeyahay) ama ku dhashay mar kale (sida Ciise ayaa sheegay in John 3: 7), waxaad u leeyihiin in ay si shakhsi ah u hesho Rabbi Ciise Masiix. Taasi waxa John cutubka kow iyo aayaadkiisa 12-13 na bar!
Marka aad hesho Ciise, aad aqbasho Ilaah
Si Sakhayos ayaa sidoo kale badbaadiyey Ciise markhaati furayaa, ka dib markuu yahay in uu gurigiisa ugu taliyo,
"Maanta badbaadinta ayaa gurigan timid."
Marka Sakhayos ahaa badbaadiyey? - Markii uu helay Ciise!
Si Sakhayos waa run ahaantii helay badbaadiyey naftiisa u marag furay haddii:
"Bal eeg, Sayidow, nus ka mid ah waxa aan leedahay, ayaan masaakiinta siinayaa, oo haddii aan khiyaameeyay qof, waxaan mar kale afar laab siiyo."
Waxa uu ahaa ma badbaadi maxaa yeelay, wuxuu siiyey nus ka mid ah uu lacag ka miskiinka ah iyo in uu xitaa mar kale siin lahaa afar afar haddii uu qof la khiyaaneeyey. No, tan uu ku sameeyey, maxaa yeelay, hadda wuxuu ahaa badbaadiyey. Wuxuu u dhashay midhaha badbaadada!
Sakhayos waa tusaale cad oo ah kuwa sheeganaya in aad badbaadi kari maysaan by Ciise aqbalayaan, ay khaldan yihiin. Haa, khalad ah ma aha oo kaliya - waa dhagar iyo looga hortago in dadka si ay u aqbalaan Ciise oo sidaas daraaddeed iyagu waa la badbaadiyey.
Aayaddan aan Akhrino, waa in aanu ku nool nahay Ciise ka dib markii aan wax isaga ka helay. Ma aha in aan u tanaasulaan oo la bax dunida iyo dembi galay mar kale. Laakiin waxaan ku eekaan doonaa la Ciise. Ka dib markii Ciise hesho, waxaan sii wadi doonaa in ay ku noolaadaan isaga. mar kale Waxaan aragnaa in caddaynta in mid ka mid ah waa in aan aqbalo Ciise waa been. Waa maxay sababta ay jiraan iska caabin ah in aad runta this kitaabiga ah. Malaha sababtoo ah waa sidaas u fudud. Haddii la kaliya in ay aqbalaan Ciise oo sidaas daraaddeed isaga qudhiisa waxba i ammaani wax aan qabo. Waxaan aan la badbaadin doonaa shuqullo iyaga u gaar ah, laakiin anna waan badbaadi doonaa, waayo, waxa Ciise sameeyey. Waxa uu sameeyay wax kasta oo nadiif ah si aan ku badbaadno uu dhintay on the iskutallaabta iyo sarakicidda. Waxa kaliya ayay ii tahay inaan aqbalo.
nimcada Ilaah ee
I badbaadi by nimcada Ilaah, iyadoo aan loo eegin shuqulladayda sii. Anigu ma istaahilo in la badbaadiyey. Ma jiro abaal adeeg dheer oo aaminka ahu. Waa nimco.
Markii aan ka dibna ku badbaadi aan ku eekaan doonaa Ciise iyo marna ha iimaanka isaga. Waxaan soo shirtagi doonaa isaga la wax walba oo dhaca. Waxaan isaga la noolaan doonaa ilaa maalinta waa in aan guuro in isaga la, adigoo aan dhimasho ama rayrayn kitaabiga ah.
Laakiin waxaan doono aan la wada ilaaliyo, in aan rumaysadka xagga Ciise iyada oo camal fiican iyaga u gaar ah. Waxaa weli ku saabsan nimcada Ilaah. I badbaadi by nimcada Ilaah, dhawray by nimcada Ilaah oo iman guriga (badbaadada final) nimcada Ilaah.
wadnaha ee albaabka
Hadda waxaan doonayaa in aan keeno bible ah, kaas oo, inkasta oo aanay xusin erayga "heli", laakiin in si cad u muujinaysaa sida ay tahay in la aqbalo Ciise. Aayaddan waxa uu ka caawiyay dad badan in la aqbalo Ciise iyo badbaadi, waana mid ka mid ah Aayado badan oo jecel my.
Muujintii 3:20 Bal eeg, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa. Haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo inaan ku iman doono isaga iyo la cuno;, isna wuu ila cashayn.
Waa Ciise kan garaacay albaabka. Waxa uu dibadda u taagan tahay oo uu doonayo si aad u hesho galay. Waa maxay albaabka si ay wax? Waa qalbigaaga. Wuxuu garaacana ku sii jireen qalbigaaga oo aad doonayo in uu isaga aqbalaan. Waxaad ku samayn by furitaanka albaabka qalbiga iyo daaya in. albaabka isaga u fur markii uu ka soo tagaa oo wuxuu idinka Koriya. Waxaad mar kale dhalan oo dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin.